ElfNguwe: yiba y-elf kwaye ujike abahlobo bakho babe zii-elves | Iindaba zeGajethi
Inkqubo ye- Inguqulelo entsha ye-ELFYOURSELF. HNdibone enye kwiTV Umbuliso weKrisimesi benze ntoni kwi yonkis.com yamakhwenkwe Ndiyayazi into oyenzileyo….. Sithi halala emva koko www.zindawo.com Apho basivumela ukuba silayishe imifanekiso yethu kwaye sibeke ubuso kwezinye iindawo ezintle zokudanisa kunye neengubo ezincinci eziluhlaza.
Kuyabonakala ukuba le nkonzo ayisiyonto intsha, kodwa kukusebenza okutsha oko ivumela ukongeza imifanekiso emininzi ke unokwenza ikhadi leposi leKrisimesi kunye nabahlobo bakho abasenyongweni. Kananjalo kamva ungabathumela i-imeyile ukubona oopopayi kwaye konke simahla.
Kwikhonkco elingasentla ukwazile ukubona indlela ukuvuyisana kweelves zeLaSexta ezijongeka ngayo. Apha ngezantsi unayo ividiyo yeYouTube apho unokubona ukuba ijongeka kanjani xa usenza isimemo nge-elf enye:
Kulungile ukuba uqinisekile ukuba siza kubona ukuba yi-elf, wena nabahlobo bakho (abahlobo), kunye nendlela evuyisayo ethunyelwa ngayo ngeposi. Vumela i-elfamorphosis iqale !!
1º) Yiya ku lvvvideo kwaye ucofe apho ithi "QALISA I-ELFAMORPHOSIS!"
2nd) Uya kuba nayo phambi kwakho iwindow enje ngale ilandelayo. Apho kuya kufuneka ucofe kwiqhosha «LAYISHA IFOTO» (layisha-layisha ifoto) ukufumana umfanekiso kwi-hard drive yakho ofuna ukuyisebenzisa. Sukuba nexhala lokuba unemifanekiso yomzimba epheleleyo njengoko unokufumana kamva indawo yentloko yokwenza i-elf yakho ngokwezifiso. Inye kuphela into ekufuneka uyigcinile engqondweni yile umfanekiso awunobunzima obungaphezulu kwe-2 megabytes.
3º) Kuya kufuneka uyamkele imigaqo yokusetyenziswa ukuba ufuna ukwenza ikhadi lakho elven. Ukuba uyavuma, cofa ku "YAMKELA" kwaye iwindow iya kuvula apho unokufumana khona umfanekiso oza kuwusebenzisa. Xa sele ulayishiwe, uya kuba nayo phambi kwakho i "LUNGISA IFOTO" iwindow apho unokutshintsha ubungakanani kunye nokuthambekela komfanekiso ngokuxhaphaza "ISALE" (isikali) okanye "ROTATE" (ujikelezo) ngokwahlukeneyo.
4) Ungawushenxisa umfanekiso ngokunqakraza kuwo ngaphandle kokukhupha iqhosha, uhambise imouse de intloko yefoto yakho ihambelane nolwandlalo oluzotyiweyo. Ukuba ufuna ukubona ukuba ijongeka kanjani, unokucofa kwi «TEST FACE» (Uvavanyo lobuso) ukujonga ukuba ngaba uhlengahlengiso luchanekile.
5th) Ukuba asiyithandi, sinokuqhubeka nokutshintsha ifoto okanye ukulayisha entsha ngokunqakraza kwi "UMFANEKISO OMTSHA" (Ifoto entsha). Xa sonelisekile ngenxa yesiphumo, cofa ku «YONGA UBUSO»(Rekhoda ubuso) ukugcina ubuso obenziweyo. Ngoku inkqubo iya kukubuza «YENZA ENYE ENYE? » (Ngaba sidibanisa enye i-elf?).
Ngoku ukuba ufuna ukongeza ubuso obuqhelekileyo, cofa ku "LAYISHA UMFOTO" kwaye uphinde inkqubo. Ukuba ufuna ukuba yeyakho ElEEwe Nabani na ongeze obunye ubuso ngokunqakraza ku «I-RANDOM ELF»(Random Elf) kwaye ukuba ufuna ubuso bakho buvele, musa ukongeza eminye imifanekiso. Kuzo naziphi na kwezi meko zintathu, wakugqiba, cofa u "MASIYE ELF" (Masihambe siye elves) kwaye uqale umdaniso.
6th) Kwiwindow elandelayo baya kukubuza ukuba uyafuna ukongeza ilizwi lakho kwi-elf (Ufuna elf nelizwi lakho?) Cofa ku "HAYI" kuba lo msebenzi uhlawulwe. Siza kuqhubeka ngaphandle kokuhlawula i-euro enye (idola, ipeso, ...) kwaye ngokunqakraza ku "HAYI" siya kuba notshintsho lube yi-elf egqityiweyo ("ELPHAMORPHOSIS COMPLETE") simahla.
Kule festile yokugqibela unakho ukujonga kuqala isiphumo ngokunqakraza kwi "PHAMBILI", yithumele kumhlobo ngokunqakraza ku «Thumela umhlobo«, Yenza ikhadi elitsha leKrisimesi ngokunqakraza ku« QALA NGOKUQALA »okanye ukope ikhonkco ngqo kwikhadi leposi ngokunqakraza ku-" KHOPELA I-ELF YAKHO ".
Kwaye kunjalo. Apha uneziphumo zokuguqula iTux (ukusuka Umyalelo weLinux) kwi-elf yeKrisimesi:
Elvish Tux -
Ndiyathemba ukuba nithumela iiposikhadi ezihlekisayo kubo bonke abahlobo bakho (abahlobo) kwaye bayonwaba ngale nto ilungileyo kwaye iluncedo kwiKrisimesi. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Elf ngokwakho - yiba y-elf kwaye ujike abahlobo bakho babe zii-elves
I have one out there made with my friends ... hehehe ... Kutxi did it, now I have to make one for my mother with the four of the family ... ubuvila: S
Ndilandela enye efanayo, kodwa imifanekiso iyaphuma ngokungathi ubuyividiyo ephosa ibhola ekhephu nabanye ... Ayizokuvakala njengawe, akunjalo?
Ewe, musa ukonqena, ngumzuzwana;) =
Ndifuna ukwenza enye ye-elf kwaye xa ndiyamkela, yonke into iyahamba, iyanqamuka, kwenzeka ntoni? Kufuneka ndenze ntoni?
Umsebenzi ndizamile ukukhangela into efana nale uyibala kodwa akukho kwanto. Ndiyathemba ukuba umntu omaziyo uyakusifunda asiphendule. Konke okugqibelele.
USusana, njengokuba yonke into isiza ngesiNgesi, ucofa phi xa usithi uyinika ukuba yamkele, ingaba ingo "qala ngaphezulu"?
Ayindivumeli ukuba ndingene kwiphepha, kwaye ayindivumeli ukuba ndingene kwikhonkco.
Ngaba ingayingxaki leyo?
Ndiyayixabisa le ngcaciso.
Hugo ayingowokuqala ngale ngxaki, zama ukufaka i-firefox.
NdineWinXP, kwaye ndinenguqulo yamva nje yeFirefox efakiweyo, kwaye andinakungena kweli phepha. Yiza, ndingangena, kodwa isikrini asihambi nto, ngokungathi akukho nto kuso. Ngaba kuya kufuneka ndifake into?
Sisoloko sifika kuKOPI ELF YAKHO kwaye khange sikwazi ukuthumela
Lo myalezo ungachaza eli nqaku ngokweenkcukacha njengoko ndikopa iklibhodi endingaqondiyo.
Molo genny, KHOPHA INDLELA YAKHO oyenzayo yikopi kwibhodi eqhotyoshwayo kwidilesi yekhonkco apho kukho ikhadi leposi lika-ElfYourself. Ke ungangcolisi, kungcono ucofe ku "THUMELA UMHLOBO" kwaye unike i-imeyile, i-imeyile iya kufika nekhonkco kwikhadi leposi. Konke okugqibelele.
Ndizamile ngoku ukwenza i-elf yeKrisimesi ... kwaye mhlawumbi kungenxa yokuba imihla efanelekileyo sele idlulile kodwa ndihlala ndifumana iphepha livaliwe, indivumela ukuba ndingene kwelinye iphepha le-ofisi. Ndingathanda ukwazi ukuba yiyo loo nto okanye ukuba ndinenye ingxaki, enkosi kunye nokuzithoba
Musa ukuphambana, bavale ikhonkco, ixesha.
Phendula kwi nes
Ewe, sele ivaliwe, kuya kufuneka silinde unyaka olandelayo.
umbuzo? Eske ndifuna ukuyibeka engqinibeni andikwazi, ndingayibeka njani, andazi inye into endiyifunayo kukuba umntu andixelele ukuba ndiyinike phi ukuze iphume ngoku izokubeka ubuso bakho kwaye ngumbulelo
Ndiyinika iphepha kwaye amki andifumani nto kwinkwenkwezi i-efamolphosis kwaye emva koko andinakuyenza ngathi kufanele ukuba ndizenzele unodoli
Ndifuna ukwazi ukuba ikhona na indlela endinokuyigcina ngayo kwikhompyuter
Andiyifumani (QALA i-ELFAMORFOSIS), indixelela ukuba ndiyikhuphele ngqo ifoto, kwaye xa ndifika esiphelweni indibuza iphasiwedi yam yekhompyuter kunye nedilesi ye-imeyile, ngoba? Bakuhlawulisa xa ugqiba yonke imali oyibeke apho? Enkosi
Ndingayikhuphela njani enye ethunyelwe kum? ngaphandle kokuhlawula ipeni ngokucacileyo. yena yena
Kuhle kakhulu ukuba ndine-elf yam kwaye khange indinike ithamsanqa kodwa olu lwazi luluncedo kum
Ukuba awuyiboni ividiyo, ndiye ndothuka
Ana & vero sitsho
Molo SIYAFUNA UKWENZA INDIBANO YALEZI ZIHLOBO ZETHU AND ASIKHO NGQIQO, UMNTU USICACISA ??
GARCIAS, uxolo ngenkxamleko yakho! 🙂
Phendula kwi-ana & vero
Andazi kwanto 🙂
sestayo umhlophe sitsho
Ndiyazithanda ezi vidiyo
Phendula blanca sestayo
NDIKUNQWENELELA UKUBEKA EYONA NTO IBALULEKILEYO KUFUNEKA UHLAWULE.
Andikwazi ukuqala i-morphosis ekufuneka yenziwe
Phendula kwi logging
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingadlulisela njani ku-facebook, kodwa kwiqela ... hayi eludongeni lomhlobo ... Enkosi ...
Ndizakuyenza lento ngaphandle kwemvume yabazali bam kwaye ndizokonwaba andikaze ndibaxokise abazali bam ndiyaqala ukuyenza
Intombazana entle sitsho
Kuhle, kuhle kwaye kuyahlekisa ...
Phendula intombazana entle
akukho nooo, ela phepha elfyourself.com alibonisi ukuba ndibeke ubuso kubahlobo bam… ayibonisi, ithi kuphela inkwenkwezi yokuthenga i-officemax.com ukuba ayisabonisi ubuso be-goblin njengoko kwakunjalo ngaphambili, ukuba kunokwenzeka, yintoni isihogo esibi kubo ... Ndiyayithanda kwaye ayiyi kuvumela me ...: (ela phepha landihlekisa kakhulu kwaye Lindihlekisa kakhulu ... yeka ukudana ukuba uyandibonisa hayi ...